News & Announcements – Page2– Ministry of Hotels & Tourism Myanmar
April 1, 2020adminNews & Announcements
COVID-19သက်ရောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်မှုရှိနေသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားCOVID-19 Fund မှထုတ်ပေးမည့်ချေးငွေလျှောက်ထားခြင်းကိုOnline မှဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းအသိပေးခြင်း
၁။ COVID-19 သက်ရောက်မှုကြောင့် ထိခိုက်မှုရှိနေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားCOVID-19 Fund မှ ထုတ်ပေးမည့် ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေးကြေညာချက်ကို၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကြေညာချက်အရ ချေးငွေလျှောက်ထားလွှာများကို သတ်မှတ်ပုံစံဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်နေ့မှ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့အတွင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရုံးများတွင် လက်ခံသွားဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါသည်။ ၂။ ယခုအခါတွင်COVID-19 ရောဂါပြန့်ပွားမှု ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက် လျှောက်ထားသူ များ တစ်နေရာတည်းတွင် အများအပြား စုစည်းနေခြင်း မရှိစေရေးအတွက်လည်းကောင်း၊ လျှောက်ထားသူများ မိမိနေအိမ်၊ မိမိရုံးခန်းမှ သက်သာစွာဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်စေရေးအတွက် ချေးငွေလျှောက်ထားလွှာများအားOnline မှလည်း လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၃။ ချေးငွေလျှောက်ထားနိုင်ရေးအတွက်...
၁။ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း (၉) မျိုးဝယ်ယူရန်အတွက် တင်ဒါကော်မတီက သတ်မှတ်စံနှုန်းများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီစိစစ်ရွေးချယ်ပြီးနောက် ဤဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံ ခန့်ခွဲမှုကော်မတီသို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူခဲ့ရာ (၂၆-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သည့် ကော်မတီအစည်းအဝေးက အောက်ပါကုမ္ပဏီ(၂) ခုမှ ပူးတွဲပါပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူရန် သဘောတူ ခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပါသည်- စဉ် ပစ္စည်းအမျိုးအမည် ဝယ်ယူမည့်ကုမ္ပဏီအမည် (က) Air-con (1.5 HP), Split Type Linn IT Solution (ခ) Laser Printer LBP-2900 Linn IT Solution (ဂ) Projector Epson EB 1450 Ui New Era Technology (ဃ) Desktop Computer Branded...
December 11, 2019mohtNews & Announcements
MAI to fly Yangon-Seoul direct flight
Myanmar Airways International (MAI) will launch its Yangon-Seoul direct flight this month, according to President and Chief Operating Officer Chanho Hong of Meebang Air Agencies. The direct flight is the cooperation between the MAI and South Korea’s Meebang Air Agencies. MAI will fly four daysaweek on Tuesday, Thursday, Saturaday and Sunday. The...
April 12, 2019adminNews & Announcements
2019 Myanmar Traditional Festival will be celebrated near Information Counter of Ancient City
Nay Pyi Daw, 12th April Bagan Thingyan Festival will be celebrated near the Information Counter next to Bagan Palace in Bagan Ancient City with the supervision of Directorate of Hotels and Tourism, with the corporations of Myanmar Hoteliers Association (Bagan), Myanmar Restaurants Association (Bagan), Bagan Regional Guide Association (Bagan). In this event, there will have...
April 2, 2019adminNews & Announcements
Innlay Lake, the high land lake in Shan State, the hilly region of Myanmar is one of the most well-known tourism site for both local and foreign visitors. It is famous for the beautiful serenity and the culture of Innthar ethnic people living in the floating houses upon and around the lake. One of the...